Duulimaadkii Ganacsi ee ugu Horeeyay wuxuu ka Bilaabmay Khadka Tareenka ee Samsun Sivas Kalın | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia58 SivasDuulimaadkii Ganacsi ee ugu Horeeyay wuxuu ka Bilaabay Khadka Wadada ee Samsun Sivas Kalın
04 / 05 / 2020 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, SAWIRADA, GUUD, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
sivas samsun khadka tareenka mar labaad ayaa la furay
Sivas-Samsun, line Turkey ee tareenka birta marka hore la furay, mid ka mid ah wadada ku saabsan 5 sano oo shaqo ah oo casriyaynaysa ka dib.
Xariiqda dheer ee 12 KM u dhaxaysa Sivas iyo Samsun, oo ku dhex taal xudduudda Gobolka 2015aad ee TCDD, oo la xiray 4kii Juun 378 iyo kaabayaashii iyo heerarkii dhismahooda hore ayaa dib loo furay. Shaqada cusboonaysiinta ee khadka wax laga weydiinayo ayaa leh muuqaalka ugu sareeya ee lagu maalgeliyo mashruuca ee ka dhexeeya waddamada aan ahayn Midowga Yurub.
Baaxadda hawlaheedii cusboonaysiinta, xitaa isgaarsiinta iyo nidaamyada isgaarsiinta ayaa la rakibay oo 48 buundooyin taariikhi ah ayaa dib loo soo celiyay 30 buundo iyo 54 XNUMX buundooyin ayaa dib loo dhisay.
Heshiis ayaa lagu saxeexay EUR 85 15.06.2015 oo loogu talagalay casriyeynta qaybta khadka ee u dhexeysa Kal - Samsun, kaas oo ahaa 258.799.876,70 boqolkiiba Sanduuqa Deeqaha Midowga Yurub, iyo dhismaha calaamadaynta. Kordhinta daahfurka, kaabayaasha iyo qaab dhismeedka supe-wayne ayaa lagu dhammeeyay baaxadda mashruucan oo ah 350.517.620,10 EUR waxaana la dhameystiray howlihii saxiixayaasha.
Guddoomiyaha Sivas Salih Ayhan wuxuu booqday Saldhigga Kalin sababtuna ay tahay sii wadida Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare (YHT) ee xarunta dhexe ee Sivas, halkaas oo rakaabku halkaas uga safray tareenka xamuulka.
Isaga oo la hadlaya xubnaha saxaafadda halkan, ayuu Salih Ayhan sheegay in cudurka faafa ee adduunka oo dhan lagala dagaallamay adduunka. Isagoo ogaynaya in noloshu sii socoto inkasta oo uu cudurku faafo, ayuu guddoomiye Ayhan yidhi, “Xaaladda waxsoosaarku si dhakhso leh ayay u shaqeeyaan. Waxaan arki doonnaa mid ka mid ah tusaalooyinka la taaban karo ee maanta. Sivas - Khadka Samsun, inta u dhaxaysa Kalin iyo Samsun, waxaa la geeyay dayactir sanadkii 2015. Shaqo aad u culus ayaa la qabtay 5 sano. Ilaa maanta waxay bilaabaysaa duulimaadyo ganacsi. Khadkan wuxuu leeyahay faa'iidooyin waaweyn xagga ganacsiga iyo bulshada labadaba. Waxay leedahay shaqo aad u xoog badan maadaama ay xiriir la leedahay Badda Madoow waxayna saf u tahay labada dhismooyinka bari iyo koonfurta. Mashruucan; Waa mashruuca leh heerka ugu sarreeya ee deeqaha ee dalalka aan ku jirin Midowga Yurub. 85 boqolkiiba tan waxaa daboolay maalgelinta EU, 15 boqolkiiba Wasaaradda Gaadiidka iyo Agaasinka guud ee TCDD. Marka markaan eegno, tiradu runtii waa tiro aad u badan. Markaan eegno qiimaha, waa iska cadahay inay tahay mashruuc weyn. ” ayuu yiri.
"Furitaanno muhiim ah ayaa la qaban doonaa sannadka 2020"
Isagoo hoosta ka xariiqay in Sivas ay tahay meel muhiim ah marka loo eego dariiqa tareenka, ayuu Guddoomiye Ayhan yiri, “Waxaan rajeynayaa, in isla kan lagu furo tareen xawaare sare leh xaflad wanaagsan, Sivas waxay sameyn doontaa furitaankii ugu weynaa taariikhdeeda 2020. Waxay bilaabaneysaa markii ugu horeysay. Wuxuu u socdaa inuu xamuul ka qaato Turhal. Sanadka 2019, ku dhawaad ​​1 milyan oo xamuul oo xamuul ah ayaa la raray ilaa heer ku meelgaarka aqbalaada. Bartilmaameedka ayaa rajeynaya inuu qaado 3 milyan oo xamuul sanadkii ah. Tani waa tiro aan caadi ahayn ee gaadiidka xamuulka. Nasiib wacan Gobolkeenu ha jiro. Waxaan wacaa caafimaadkaaga foosha. Waxaan u baahanahay adeegsi shil la'aan. Sivas waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu nasiibka badan dareenkan. Waa wax aan caadi aheyn in hal mashruuc kaliya uu leeyahay qarash badan. Waa muhiimadda ay dowladdeenu u leedahay gaadiid xamuul. Si dhakhso ah, waad ogtahay, waxaa jira daraasado ku saabsan YHT. Suuragal maahan in uu ku dhaco cudurka cudurka coronavirus, laakiin wuxuu ku dhacay illaa xad yar. Laakiin hawsheena qandhada ayaa si xawli ah u socota. Waxaan rajeyneynaa inaan xafladeena u wada qaban doono Y YHT 2020. ” ayuu hadlay.
Salih Ayhan ayaa markaa kadib bilaabay safarka tareenka isagoo khadka taleefanka kula hadlay Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun, wuxuuna uga mahadceliyay dadaalkiisa iyo dadaalka qandho.
In barnaamijka, Agaasimaha Boliiska Gobollada Kenan Aydoğan, Taliyaha Gobolka Gendarmerie İdris Tataroğlu, Ku-simaha 4aad ee TCDD Agaasime Goboleedka Ali Karabey iyo qeybaha kale ee daneynaya ayaa sidoo kale ku lug lahaa.
Casumaadinta Samsun Kalin Railway Line ayaa bilowday
Mashruuca Xawaareynta Wadada ee Zamun-Kalın Koronto, calaamad iyo…
Waxyaabaha ganacsi ee ugu horreeyay ayaa u soo guuray dalka Turkiga - Giriigga
Maanta: 23 Abriil 1926 Samsun-Kavak line of Samsun-Sivas ayaa la furay.
Daraasadda Suuragalnimada Mashruuca Casriyeynta ee Khadka Tareenka ee Samsun-Kalın iyo…
Faahfaahinta Mashruuca Mashun Khadka Tareenka ee Samsun Kalin ...
Goorma ayaa la furayaa 'Subraniye Ataşehir Göztepe Subway'?
Samsun - Kalın Railway Line Casriyeynta Mashruuca Dhismaha ayaa ka shaqeeya wiil jilicsan
Samsun-Kalin Railway Line ayaa la furi doonaa dhamaadka 2018
Mashruuca Casriyeynta ee Samsun-Kalın Çelikler - Gülermak - AZD wadaag…
Goorma la furaa Samsun-Kalin Railway Line?